N'oge okpomọkụ na Tunisia | Akụkọ Njem
N'oge okpomọkụ na Tunisia
Mariela Carril | | Osimiri, Tunisia
North nke Africa bụ Tunisia Republic, nke a na-akpọkarị Tunisia. Ọ dabere na Mediterenian, n’agbata mmiri ya na Ugwu Atlas, ebe ọzara Sahara a ma ama bi n’ókèala ya.
N'oge ọkọchị ezigbo ihu igwe na-achị. Site na Mee ị nwere ike ịnụ ụtọ ọbịbịa na mbara ọzara, saịtị ihe ochie na ụsọ mmiri n'ihi na ọnọdụ okpomọkụ dị n'etiti 12 na 28 ºC yabụ ọbụlagodi na ọ nweghị oge okpomọkụ dị jụụ ọ bụ oge dị mma iji nwee ọ enjoyụ n'èzí. Leekwa osimiri dị na ya nwere! Ka anyị chọpụta mgbe ahụ Kedu ihe ị ga-eme n'oge okpomọkụ na Tunisia.
1 Osimiri Tunisia
7 Sidi Bou kwuru
Coastsọ Oké Osimiri Mediterenian na-etinyezi obodo ndị mepere emepe bụ ndị tụgharịrị gaa na ọrụ ụgbọ mmiri na njem nleta. Obodo a nwere kilomita 1300 nke ụsọ oké osimiri na ihe dịka 600 n’ime ha ka osimiri bi na ya. N'oge ọkọchị ọ bụla, enwere ihe dịka nde ndị njem asaa bụ ndị bịara ịnụ ụtọ ha.
Na spa ndị a onyinye ulo di iche You nwere ike ịgbazite ụlọ ma ọ bụ gaa obere ụlọ nkwari akụ ma ọ bụ ụlọ nkwari akụ dị oke ọnụ ma ọ bụ ọbụna ụlọ nkwari akụ ọzọ. Ka anyị hụ ụfọdụ n'ime ebe kachasị mma na ndị njem nleta.
Ọ bụ agwaetiti nke gbara kilomita 25 ogologo site na 20 n'obosara ma nwee kilomita 150 nke ụsọ oké osimiri. Ọ dị ihe dịka mita 2 site n'ụsọ oké osimiri, na Ọwara Oké Osimiri Gabés, ọ bụkwa ebe dị mma. A makwaara ya site na aha Jerba, Yerba ma ọ bụ Gelves.
O nwere ezigbo ọdụ ụgbọ mmiri dị na ndịda ụsọ oké osimiri na ọtụtụ narị afọ nke akụkọ ntolite kemgbe Ndị Carthaginians, ndị Rom, ụfọdụ agbụrụ ndị mba ọzọ, ndị Byzantium na ndị Arab mechara gafee ebe a. Obodo ọ bụla ahapụla akara ya, yabụ karịa ịnụ ụtọ anyanwụ na oke osimiri, enwere ezigbo ebe ị ga-atụfu onwe gị n'oge gara aga.
Gaa Djerba i bata n'ụgbọ mmiri site na kọntinent ma site na mbupu ma ọ bụ "okporo ụzọ Roman" kilomita asaa n'ogologo ma ọ dịkarịa ala site na narị afọ nke atọ BC Ọnọdụ okpomọkụ ya kwa afọ dị gburugburu 19 ºC na ya kachasị n'oge ọkọchị bụ 33 ºC. Obi ụtọ n'ihi na ikuku na-efegharị ma na-ajụ ezigbo oyi. Ebe a na djerba ọ dịkarịa ala, osimiri 20 dị, ha niile n’ụsọ ebe ọwụwa anyanwụ na ájá ọlaedo niile.
Tupu afọ ndị 50 ọ bụghị njem nleta mana na etiti afọ iri ọ rutere Club Mediterranean wee gbagọọ agbagọ n'akụkọ ihe mere eme. Yabụ, ka ọ na-erule 80s, agwaetiti ahụ dum amalitela njem na njem. Oge agafeela ahapụla ụlọ nkwari akụ dịtụ n'azụ ma nwekwaghị ịma mma nke oge gara aga mana enwere onyinye ọhụụ na ụlọ ọrụ na-agba mbọ site n'oge ruo n'oge iji nye ndị ọbịa ya ihe kachasị mma, yabụ enwere cha cha, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, mkpọmkpọ ebe mgbe ochie, ebe gọọlfụ, spa na ndị ọzọ.
Osimiri kachasị mma bụ Sidi Bakkour, Sidi Hacchani na Sidi Mahrez, na ugwu ugwu, tinyekwa ndi no na ndida, Sidi Jmour n’ebe ọdịda anyanwụ nakwa n’ọwụwa anyanwụ nke Agiri na Sidị Garrous.
N’ebe ọwụwa anyanwụ ụsọ oké osimiri nke Tunisia bụ obodo a nke bụ isi obodo ọchịchị Susa. Ọ dị kilomita 140 site na Tunisia ma dọrọ na Gulf of Hammamet. Medina ya bụ kemgbe 1988 Ihe Nketa Worldwa.
Na-adịghị anya dị n'etiti Susa bụ Ogige ndị njem nleta Port El Kantaouti, a maara dị ka «akpa ubi n'ọdụ ụgbọ mmiri nke Mediterranean». Ọ bụ ụdị ndị Tunisian 100%, nke na-ewetara anyị mpempe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na nke wavy, nke ikuku Arab na Andalusia, nke hotels, ụlọ, ụlọ ahịa na ebe a raara nye ezumike. A na-agbakwunye marina ahụ, nwere ikike maka oge 340, na ebe a na-akụ golf.
Chọpụta, anyị enweghị ike ichefu banyere mwakpo ISIS mere ebe a na 2015 ma ihe karịrị mmadụ 30 nwụrụ. Onye na-eyi ọha egwu nke ji egbe egbe Russia gbagburu n'ụsọ osimiri nke ụlọ nkwari akụ nke Riu.
Ọ bụ obere obodo gbara osimiri okirikiri aha ya sitere na Latin. Ọ dị naanị kilomita 162 site na Tunisia, isi obodo nke obodo ahụ, na ndịda Susa, na nsọtụ Ọwara Ọwara Hammamet. Ọ na-enwe ihu igwe dị nro, mbara igwe na-adị ọcha n'oge okpomọkụ ma mmiri ya na-enwu gbaa na ụzarị anyanwụ.
Onu ogugu ndi mmadu 50 puku mmadu bi na ha maara otu esi anabata ndi obia. Obodo ahụ, ọ bụ ezie na ọ pere mpe, nwere ọtụtụ narị afọ nke akụkọ ntolite ya nwere ihe nketa na ọdịbendị bara ọgaranya, yana ọdịnala, gastronomy na ememme mara mma. Echefula ileta Ribat, ebe e wusiri ike, otu n'ime ụlọ ndị kachasị mma na mba ahụ, yana oke osimiri dị ukwuu, na ndị na-eji anwụ anwụ na ahịhịa ahịhịa, dị mma dị ka ha bara uru.
Ọtụtụ ma ọ bụ obere ndị bi na ya nwere Mahdia, obodo ọzọ mara mma nke dị n’akụkụ mmiri. Ọ dị n'akụkụ ndịda ọwụwa anyanwụ nke Monastir ọ bụkwa isi obodo nke otu gọvanọ nke otu aha ahụ na-adịghị ebi naanị site na njem nleta kamakwa site na ịkụ azụ na nhazi ya.
Nwere ike iru ụgbọ okporo ígwè si Monastir ma ọ bụ site na Susa na akụkọ ihe mere eme na-agwa anyị na ọ bụ isi obodo mbụ nke ndị caliefis Fatimidị na narị afọ nke XNUMX. Otu agha ntụchi Onye Kraịst gafere ebe a yana kwa corsairs ndị na-esokarị Oké Osimiri Mediterenian. Taa, otu n'ime ụlọ ihe nnọchianya ya kachasị mma bụ Ebe e wusiri ike nke Borj el Kebir, nke e wuru na njedebe nke narị afọ nke XNUMX iji chebe ndị Spen.
Ọ na-adabere na a nkume peninshula ma osimiri ya bu aja aja. Ndammana, ọ bụ ebe dị mfe ma dị jụụ karịa Djerba.
Ọ bụ Osisi ndị njem nleta nke ụlọ nkwari akụ ha buru ibu. Nwere a ochie medina, n'okpuru ebe e wusiri ike na n'akụkụ ọdụ ụgbọ mmiri, na ọzoo ọphuu nke dị na mpaghara nkwari akụ nke Yasmine.
Complexlọ ọhụrụ a gbara ogologo ogologo otu kilomita na gburugburu. Ọ dị ka nnukwu ụlọ ochie ọ bụ ezie na ọ bụghị ma ọ bụ e mere na wuru maka kpomkwem na. Medina Yasmine Hammamet nwere kemgbe ụlọ ahịa na diski na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ na ụlọ oriri na ọ passingụ restaurantsụ na-agafe na hamman na ọtụtụ ụlọ.na-eme n'oge okpomọkụ ọ bụla, ha na-ejide onwe ha karịa.
Maka ọchị enwere mgbagwoju anya Ala Carthago, lekwasịrị anya n’inye ndị ọbịa ya panorama nke puku afọ abụọ nke akụkọ ntolite n’ụzọ kachasị mma na nke kachasị ụtọ. Enwere ụdị, ihe nkiri nke ndụ ụbọchị na mgbanwe ya ọtụtụ narị afọ, yana ngosipụta mmekọrịta.
Nwere ike ịnụ ụtọ ụsọ osimiri, rie na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ nke na-ele anya n'oké osimiri ma ọ bụ nọrọ na ụlọ dị ọcha dị ka snow iji nwee ọ yourụ nke na-ele anya na-acha anụnụ anụnụ.
Sidi Bou kwuru
Ọ nwere ọnụ ọgụgụ siri ike nke naanị mmadụ 5 mana ọ na-eto ruo 150 mgbe oge ọkọchị rutere. Ọ bụ otu n'ime ebe okpomọkụ kachasị ewu ewu na Tunisia ma ọ bụ naanị 20 kilomita site na isi obodo Tunisia. Ọ bụ n'ihi nke ahụ.
Ọ bụ akwụkwọ ozi ochie nke Mediterranean ebe ọ bụ na 20s nke narị afọ nke XNUMX ndị bi na ya na-aga n'ihu na ntinye agba ihe niile na-acha ọcha na-acha anụnụ anụnụ: mgbidi ọcha na ibo ụzọ na-acha anụnụ anụnụ, windo na Ogwe. N'etiti ọdịbendị ọdịbendị ya bụ ụlọ eze nke Baron Erlanger, otu onye nyere aha ya iwu nke na-akwado ịkwado nkwa a nke agba na obodo ahụ, na ụlọ alakụba Zaouia.
Ala mara mma emeela ka ọtụtụ ndị na-ese ihe nwee ike ịga n'ihu na-eme ya enwere ọtụtụ veranda nka na ebe obibi. Ihe kwesiri ihu bu Café des Nattes, bu ebe ndi edemede dika Gide gara na nmalite nke iri abuo. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-enyocha, ịnwere ike ịla otu awa ma ọ bụ karịa wee rute Bizerte, saịtị nke ebe akụkọ ihe mere eme mara mma.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime oge ezumike kachasị mma na Tunisia. Ha bụ ebe a ma ama mana ị nwere ike ịkọ ọnụ ebe a ma ọ bụrụ na ịchighi igwe mmadụ, ịnwere ike ịkwụsị ebe ndị dị jụụ ma sie ike karị, dịka Tabarka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Tunisia » N'oge okpomọkụ na Tunisia